Bacterial Meningitis (ဘက်တီရီးယား ကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ဦးနှောက် အမြှေးပါးရောင်ခြင်း) - Page 12 of 19 - Hello Sayarwon
Khine Phoo Ngon မှ ရေးသားသည်။ 18/01/2022 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
Bacterial Meningitis (ဘက်တီရီးယား ကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ဦးနှောက် အမြှေးပါးရောင်ခြင်း) ကဘာလဲ။
Meningitis ဆိုတာဟာ ဦးနှောက် နဲ့ ကျောရိုးမ ပတ်ပတ်လည်မှာ ဝန်းရံထားတဲ့ အမြှေးပါးတွေ ရောင်တာကို ခေါ်ပါတယ်။ ဘက်တီးရီးယားကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ဦးနှောက် အမြှေးပါးရောင်ခြင်း ဟာ အရမ်းပြင်းထန်ပြီး သေနိုင်လောက်တဲ့အထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နာရီ အနည်းငယ်အတွင်းမှာ သေနိုင်ပါတယ်။ ဦးနှောက်အမြှေးပါးရောင်ခြင်း ဖြစ်တဲ့သူအများစုမှာ ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာပြီ ဆိုရင်တောင် ရောဂါပိုးဝင်မှုကြောင့် ဦးနှောက်ပျက်စီးခြင်း၊ အကြားအာရုံ ပျောက်ဆုံးသွားခြင်း၊ နဲ့ သင်ယူနိုင်မှု လျော့နည်းလာခြင်း စတဲ့ ဆိုးကျိုး ပျက်စီးမှုတွေကို တစ်သက်လုံး ဆက်လက်ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ဦးနှောက် အမြှေးပါးရောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ဘက်တီးရီးယား အမျိုးအစား အများကြီးရှိပါတယ်။ အဓိက ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အကောင် တစ်ချို့ကတော့ Streptococcus pneumoniae, group BStreptococcus, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenza နဲ့ Listeria monocytogenes စတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ ဘက်တီးရီးယားတွေက အခြားသော ပြင်းထန်တဲ့ နာမကျန်းဖြစ်မှုတွေ၊ sepsis တွေနဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။ sepsis ဆိုတာဟာ ရောဂါ ပိုးဝင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့ ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့ အသက်အန္တရာယ်ကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့၊ ပြင်းထန်တဲ့ ပိုးဝင်မှုအပေါ်တုံ့ပြန်ချက်တစ်ခု ဖြစ်ပြီး တစ်ရှုးပျက်စီးခြင်း၊ ကိုယ်တွင်းအစိတ်အပိုင်းများ ပျက်စီးခြင်း နဲ့ သေဆုံးခြင်းတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
Bacterial Meningitis (ဘက်တီရီးယား ကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ဦးနှောက် အမြှေးပါးရောင်ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
pneumoniae, group B Streptococcus, N. meningitidis, H. influenzae, နဲ့ L. monocyteogenes စတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ဦးနှောက်အမြှေးပါးရောင်ခြင်း ဖြစ်သူ ၄၁၀၀ လောက်မှာ သေဆုံးသူ ၅၀၀ လောက်ပါဝင်နေတာကို ၂၀၀၃ ခုနှစ် နဲ့ ၂၀၀၇ ခုနှစ်အတွင်း တစ်နှစ်စီမှာ တွေ့ရပါတယ်။
သို့ပေမယ့်လည်း ဒီရောဂါကို ဖြစ်ဖို့အားပေးနေတဲ့ အချက်တွေကို လျှော့ချ ခြင်းအားဖြင့် ရောဂါကို ထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ အချက်အလက်တွေ ရရှိနိုင်ဖို့ ဆရာဝန်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Bacterial Meningitis (ဘက်တီရီးယား ကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ဦးနှောက် အမြှေးပါးရောင်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ဦးနှောက် အမြှေးပါးရောင်ယမ်းခြင်း ရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့ ရုတ်တရက်ဖျားခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ နဲ့ လည်ဂုတ် တောင့်တင်းနေခြင်း တွေပါဝင်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေမှာ အခြားရောဂါလက္ခဏာတွေလည်း ထပ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ လက္ခဏာတွေကတော့
အလင်းရောင် ဒဏ်ကို မခံနိုင်ခြင်း။
ဘက်တီးရီးယားတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ဦးနှောက်အမြှေးပါးရောင်ခြင်း ရဲ့ ရောဂါ လက္ခဏာတွေကတော့ ချက်ချင်း ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ (သို့) ရက်ပေါင်းများစွာ ကြာမှ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်တော့ ပိုးဝင်ပြီး ၃ရက်မှ ၇ရက် အတွင်း ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
မွေးကင်းစ နဲ့ကလေးလေးတွေမှာ ဦးနှောက်အမြှေးပါးရောင်ယမ်းခြင်းရဲ့ ပုံမှန်ဖြစ်တတ်တဲ့ရောဂါ လက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့ ဖျားခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ လည်ဂုတ်ေ တာင့်တင်းနေခြင်း စတဲ့ ရောဂါ လက္ခဏာတွေက မရှိတတ်ပါဘူး။ (သို့) ရောဂါလက္ခဏာတွေကို သတိပြုမိနိုင်ဖို့ ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ ကလေးလေးမှာ မလှုပ်မရှား၊ မတက်မကြွ၊ ဂနာမငြိမ်ဖြစ်ခြင်း၊အန်ခြင်း(သို့)အစာ ကောင်းကောင်းမစားခြင်းတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ငယ်ရွယ်တဲ့ကလေးတွေမှာ ဆရာဝန်တွေက ဦးနှောက် အမြှေးပါးရောင်ယမ်းခြင်းရဲ့ ရောဂါ လက္ခဏာဖြစ်တဲ့ bulging frontanelle လို့ခေါ်တဲ့ ကလေးရဲ့ ခေါင်းအရှေ့ထိပ် မှာရှိနေတဲ့ ပျော့ပြောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုဖောင်းနေခြင်း (သို့) ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ တုံ့ပြန်မှုတွေ ရှိနေ၊ မနေ စမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ကလေးမှာ အထက်ပါ ရောဂါလက္ခဏာတွေ ရှိနေတယ်လို့ထင်ရင် ဆရာဝန်နဲ့ချက်ချင်း ပြသရမှာပါ။
ဘက်တီးယီးယားတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ဦးနှောက်အမြှေးပါးရောင်ယမ်းခြင်း ရဲ့ နောက်ပိုင်း ဖြစ်တတ်တဲ့ ရောဂါ လက္ခဏာတွေကတော့ အရမ်းပြင်းထန်နိုင်ပါတယ်။ (ဥပမာ- တက်ခြင်း၊ သတိလစ်နေခြင်း) အဲဒီအတွက်ကြောင့် ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် ဦးနှောက် အမြှေးပါးရောင်ယမ်းတယ်လို့ သံသယရှိရင် ဆရာဝန်ကို စောနိုင်သမျှစောစော တွေ့ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Bacterial Meningitis (ဘက်တီရီးယား ကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ဦးနှောက် အမြှေးပါးရောင်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ဘက်တီးရီးယားတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ဦးနှောက်အမြှေးပါးရောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေကတော့
Streptococcus pneumoniae, pneumococcus ဟုလည်းခေါ်သည်။
Neisseria meningitidis, meningococcus ဟုလည်းခေါ်သည်။
Haemophilus influenzae, Hib ဟုလည်းခေါ်သည်။
ဘက်တီးရီးယားတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ဦးနှောက်အမြှေးပါးရောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေက ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ခန္ဓါကိုယ်နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အသက်ရှင်နေနိုင်ကြပါတယ်။ အများစုမှာတော့ အဲဒီ ဘက်တီးရီးယားတွေက ဒုက္ခ မပေးနိုင်ပါဘူး။ အဲဒီဘက်တီရီးယားတွေက သင့်ရဲ့သွေးကြောထဲဝင်ရောက်သွားပြီး ဦးနှောက်နဲ့ ကျောရိုးမ ဆီကို ရောက်သွားတဲ့အခါမှာမှ ဘက်တီးရီးယားတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ဦးနှောက် အမြှေးပါး ရောင်ခြင်း ဆိုတာ ဖြစ်လာပါတယ်။
ဒီလို ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းမျိုးကို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ဘက်တီးရီးယား အများစုဟာ လူလူချင်း နီးကပ် ထိတွေ့မှုမှ ကူးစက်ပြန့်ပွားနိုင်ပါတယ်။ ကူးစက်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကတော့
ရောဂါပိုးဝင်နေတဲ့သူရဲ့ လည်ချောင်းထဲက စစ်ထုတ်ရည်တွေဖြစ်တဲ့ အချွဲ၊ သလိပ် နဲ့ တံတွေး တွေမှာ ဘက်တီးယီးယားပိုးမွှားတွေပါလာပါတယ်။ အဲဒီ လူက ချောင်းဆိုး(သို့) နှာချေ လိုက်တဲ့အခါ ဘက်တီးရီးယားတွေက လေထဲကို ပျံ့နှံ့သွားပါတယ်။ ဘက်တီးရီးယားတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ဦးနှောက်အမြှေးပါးရောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ပိုးတွေဟာ သိပ်ပြီး ပျံ့နှံ့ကူးစက်ဖို့ မလွယ်ကူပါဘူး။ တုပ်ကွေးပိုး (ဗိုင်းရပ်စ်)တွေလောက် ဦးနှောက် အမြှေးယောင်ခြင်း ဖြစ်စေတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေက ကူးစက်နှုန်းမများပါဘူး။
ဦးနှောက် အမြှေးပါးရောင်ခြင်း ဖြစ်စေတဲ့ ဘက်တီရီးယားတိုင်းက လူတစ်ယောက်မှ တစ်ယောက်ဆီကိုပဲ ကူးစက်နိုင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ listeria လို့ခေါ်တဲ့ ဘက်တီးရီးယားပါတဲ့ အစားအစာ တစ်ချို့ကို စားပြီးတဲ့အခါမှာလည်း ဘက်တီးရီးယားတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ဦးနှောက်အမြှေးပါးရောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ အစာတွေကတော့
Listeria ရောဂါပိုးကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ပြသနာတွေကတော့
ကလေးလေးတွေ စတဲ့သူတွေမှာ အဖြစ်ပိုများပါတယ်။
ဦနှောက်အမြှေးပါးရောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေဟာ
Sinus အတွင်း ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း။ စတဲ့ ထိခိုက်မှုတွေ အပြီးမှာ ဦးနှောက် အမြှေးပါးတွေကို တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးလေ့ရှိပါတယ်။
ဒီအခြေအနေတွေက သင့်ရဲ့ ခုခံအားကို ကျဆင်းစေပြီး သင့်ခန္ဓါကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ သဘာ၀ အတိုက်အခံ၊ အကာအကွယ် တွေကို နှောက်ယှက်နိုင်ပြီး ဦးနှောက်အမြှေးပါးရောင်ဖြစ်စေတဲ့ ရောဂါပိုးအပါအဝင် အခြားရောဂါပိုးတွေ ဝင်ရောက်နိုင်အောင် တံခါးဖွင့်ထားပေးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကလေးလေးတွေနဲ့ နဂို ကတည်းက ခုခံအားနည်းတဲ့သူတွေ မှာ ဘက်တီးရီးယားတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ဦးနှောက်အမြှေးပါးရောင်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ဖို့ ပိုများပါတယ်။ အရေးကြီးတာတစ်ခုက ရောဂါပိုးဝင်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကို ပြောဖို့ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။
ငါ့ဆီမှာ Bacterial Meningitis (ဘက်တီရီးယား ကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ဦးနှောက် အမြှေးပါးရောင်ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
Bacterial Meningitis (ဘက်တီရီးယား ကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ဦးနှောက် အမြှေးပါးရောင်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ကို ဘာတွေက ဖြစ်စေသလဲ?
ဖြစ်ဖို့ အားပေးနေသော အကြောင်းအရင်းများ။
ဘက်တီးရီးယားတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ဦးနှောက်အမြှေးပါးရောင်ခြင်းကို ဘာတွေက ဖြစ်ဖို့ အားပေးနေသလဲ?
ဘက်တီးရီးယားတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ဦးနှောက်အမြှေးပါး ရောင်ယမ်းခြင်း ဖြစ်ဖို့ အားသာနေတဲ့ အခြေအနေ တစ်ချို့ကတော့
အသက်အရွယ် : ကလေးလေးတွေ က အခြားအသက်အရွယ်တွေထက်ပိုပြီး ဘက်တီးရီးယားတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ဦးနှောက်အမြှေးပါးရောင်ခြင်း ဖြစ်ဖို့ ဖြစ်နိုင်ချေပိုများပါတယ်။ သို့ပေမယ့်လည်း ဘယ်အသက်အရွယ်မဆို မှာတော့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
လူစုလူဝေးရှိသော နေရာများသွားလာခြင်း။ ကူးစက်နိုင်တဲ့ရောဂါတွေဟာ လူထူထပ်တဲ့နေရာတွေမှာ အဖြစ်များပါတယ်။
အချို့သော ရောဂါ အခြေအနေများ။ အချို့သော ရောဂါတွေ၊ ဆေးတွေ၊ ခွဲစိတ်မှုတွေ ရှိဖူးတဲ့သူတွေမှာ ဦးနှောက် အမြှေးပါးရောင်ခြင်း ပို အဖြစ်များနိုင်ပါတယ်။
ဦးနှောက် အမြှေးပါးရောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ပိုးမွှားတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်ဆောင်နေရခြင်း။ သေးငယ်တဲ့ သက်ရှိတွေကို လေ့လာတဲ့ပညာရှင် တွေအနေနဲ့ နေ့စဉ် ဘက်တီးရီးယားတွေနဲ့ ထိတွေ့နေရတဲ့အတွက် ဦးနှောက် အမြှေးပါးရောင်ခြင်းကို ဖြစ်နိုင်ချေများ စေနိုင်ပါတယ်။
ခရီးသွားခြင်း။ ဦးနှောက် အမြှေးပါးရောင်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ sub-Saharan အာဖရိက ( အထူးသဖြင့် ခြောက်သွေ့ရာသီတွေမှာ) ၊ (သို့) Mecca ( တစ်နှစ်တစ်ခါ အစ္စလမ် လူမျိုးများ စုဆည်းချိန်) စတဲ့နေရာတွေကို ခရီးသွားတဲ့သူတွေအတွက် meningococcal ပိုးကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ဦးနှောက် အမြှေးပါးရောင်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ချေ ပိုများပါတယ်။
ရောဂါအမည်တပ်ခြင်း နှင့် ကုသခြင်း။
အောက်ပါ သတင်းအချက်အလက်တွေက ဆေးပညာအကြံပေးချက် အတွက် အစားထိုးအသုံးပြုရန်မဟုတ်ပါ။ နောက်ထပ် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ အချက်အလက်တွေ ရဖို့ ဆရာဝန်နဲ့ အမြဲတမ်းတွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးရပါမယ်။
ဘက်တီးရီးယားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ဦးနှောက် အမြှေးပါးရောင်ခြင်း ကို ဘယ်လို ရောဂါအမည် သတ်မှတ်မလဲ?
ဦးနှောက် အမြှေးပါးရောင်ခြင်းဖြစ်နေတယ်လို့ သံသယရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့ သွေး(သို့) ရိုးတွင်းခြင်ဆီ နမူနာကို ယူပြီး စစ်ဆေးဖို့ ဓါတုစစ်ဆေးခန်းကို ပို့ဆောင်ရပါမယ်။ ဆရာဝန်တွေကို ဘယ်လိုကုသရမယ်၊ ဘယ်လောက်ရောဂါ အခြေအနေဆိုးနိုင်တယ် ဆိုတာတွေ သိနိုင်အောင် ဦးနှောက် အမြှေးပါးရောင်ခြင်း ဖြစ်ရတဲ့ အဓိက အကြောင်းအရင်းကို သိရဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ ဘက်တီးရီးယားကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ဦးနှောက် အမြှေးပါးရောင်ခြင်း အတွက်ဆိုရင် ပိုးသတ်ဆေးတွေက အခြေအနေ အရမ်းမဆိုးသွားအောင် နဲ့ ရောဂါကို ဘယ်ဘက်တီးရီးယားက ဖြစ်စေသလဲ ဆိုတဲ့ အပေါ်မူတည်ပြီး လူတစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ထိတွေ့မှု မှ ရောဂါ ဖြစ်လာနိုင်ချေကို လည်း လျော့နည်းစေနိုင်ပါတယ်။
ဘက်တီးရီးယားရှိတယ်ဆိုရင် သူတို့ကို စစ်ဆေးမွေးမြူနိုင်ပါတယ်။ ဓါတ်ခွဲခန်းမှာ ဘက်တီးရီးယား မွေးမြူခြင်းက ဘက်တီးရီးယား ရှိကြောင်း အတည်ပြုဖို့အတွက်၊ ရောဂါကို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ဘက်တီးရီးယား အမျိုးအစား အတိအကျခွဲခြားဖို့အတွက် နဲ့ ဘယ် ပိုးသတ်ဆေးကို အသုံးပြုတာက အကောင်းဆုံး လည်းဆိုတာကို သိနိုင်ဖို့ အတွက် အရေးကြီးပါတယ်။ ပိုးမွေးခြင်းက ဘက်တီးရီးယား အမျိုးအစားကို မပြနိုင်ရင် အခြားစစ်ဆေးချက်တွေကို လုပ်ဆောင်ရနိုင်ပါတယ်။
Bacterial Meningitis (ဘက်တီရီးယား ကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ဦးနှောက် အမြှေးပါးရောင်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ဘက်တီးရီးယားကြောင့် ဦးနှောက် အမြှေးပါးရောင်ခြင်းကို ပိုးသတ်ဆေးတွေနဲ့ ကုသနိုင်ပါတယ်။ အရေးကြီးတာတစ်ခုက တတ်နိုင်သမျှ အမြန်ဆုံးကုသမှု တွေခံယူဖို့ပါပဲ။
ဘက်တီးရီးယားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ဦးနှောက် အမြှေးပါးရောင်ခြင်း ကို ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်မယ့် နေထိုင်မှုပုံစံ ပြောင်းလဲခြင်းတွေနဲ့ အိမ်သုံးဆေးနည်းလမ်းတွေက ဘာတွေလဲ?
တစ်ချို့သော ဘက်တီးရီးယားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ဦးနှောက် အမြှေးပါးရောင်ခြင်း တွေကို ကာကွယ်ဆေးထိုးထားခြင်းဖြင့် ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ ဦးနှောက် အမြှေးပါးရောင်ခြင်း ကို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ pneumococcus ရယ် meningococcus နဲ့ Hib စတဲ့ ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေကို ကာကွယ်နိုင်တဲ့ ကာကွယ်ဆေးတွေရှိပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေးတွေဟာ ဦးနှောက် အမြှေးပါးရောင်ခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့ အဓိက အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အတွက်၊ သင့်ကလေးအတွက် ကာကွယ်ဆေးတွေကို နောက်ဆုံးပေါ် ထုတ်လုပ်ထားတာဟုတ်၊ မဟုတ် သေချာသိနိုင်ဖို့ ဆရာဝန်ကို ပြသ သင့်ပါတယ်။
Bacterial meningitis.http://www.webmd.com/children/vaccines/tc/meningitis-topic-overview#1.Accessed 19 Feb, 2017.
Bacterial meningitis.http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/meningitis/home/ovc-20169520. Accessed 19 Feb, 2017.
Bacterial meningitis.http://www.healthline.com/health/bacterial-meningitis-causes-and-how-they-re-spread#Overview1. Accessed 19 Feb, 2017.